Masinina fanamboarana varavarankely vita amin'ny alim-bary China ho an'ny orinasa sy mpamatsy Corner Crimping | Nisen
Masinina fanamboarana varavarankely amin'ny varavarankely ho an'ny crimping
Model No.: LMB-180B
Function: ampiasaina amin'ny fanangonana varavarankely sy varavarana aliminioma.
Mampifandray ny zoron'ny profil aluminium roa miaraka amin'ny wedge apetraka ao anaty amin'ny alàlan'ny tsindry.
Endri-javatra ny milina varavarankely aluminium
➢ Ampiasaina amin'ny fanangonana varavarankely sy varavarana aluminium.
➢ Mampifandray ireo zoro misy mombamomba ny alimina roa miaraka amin'ny tsindrona apetraka ao anaty amin'ny alàlan'ny tsindry.
➢ Ny rafitra famahanana synchro dia mahatonga ny fanovana ho tena mora.
➢ Mampiasà fitaovana fampifandraisana mekanika vaovao, nahatsapa ny fikororohana zoro rehetra.
➢ Izy io dia mpanapaka tokana collocated isa maro crimping cutter mba hahazoana antoka azo antoka crimping hafanana insulation hafanana win-varavarana aluminium.
Fanerena paompy misy menaka
Fahaizan'ny boaty solika
Haavo fikirakirana profil
Ny sakan'ny fanodinana profil
Dia ny crimping casing hetsika
Fanerena ankapobeny ny zorony mitambatra
Mpanapaka Crimping mahazatra
Ny milina dia mety hahatratra ny haavon'ny fikirakirana avo indrindra amin'ny profil 180mm. Mety amin'ny fanodinana fitaovana amin'ny rindrina ambainy.
Ny milina dia miaraka amina varingarina misy menaka misaraka mba hiantohana ny fiorenan'ny herin'aratra sy ny fiasa ampy.
Ny fomba fanovana rotary dia mety kokoa ampiasaina.
Mora mihetsika ny fitaovana fikarohana, mora raisina ny mombamomba ilay masinina.
6.1 Haavo ranona ao anaty tanky ambonin'ny fenitry ny solika, hisorohana ny fitrohana paompy. Rehefa mameno solika dia misy loto maloto ao amin'ny menaka fanodinana 120 vera ao anaty menaka, sivana solika nodiovina indray mandeha isaky ny roa volana, manadio tanky antsasak'adiny ary soloina menaka vaovao. Rehefa avy nanolo ny solika vaovao indray mandeha isan-taona.
6.2 Ny mari-pana momba ny menaka miasa 20∽50 ℃, raha avo loatra ny hafanan'ny solika dia mila mandray fepetra hampangatsiahana na hampiato ny paompy mandra-pialan'ny ranon-driaka, hiasa; rehefa ambany loatra ny mari-pana ny menaka, tsy avela hiasa mivantana, raisina miampy ny fepetra amin'ny mari-pana dia azo hatsaraina amin'ny alàlan'ny menaka fanafanana na fihenan'ny tsindry ambany.
Mila vonoina mba hisorohana ny fahasimban'ny refy 6.5 mba hiasa tsara.
6.3 Paompy dia tokony hojerena sy fikojakojana herintaona
Teo aloha: Masinina fanapahana mombamomba ny konektor aluminium
Manaraka: Auto Double Head Mitre Saw ho an'ny profil Aluminium sy Pvc
Aluminium Window & Door CNC Copy Router Dr ...
Masinina fanapahana profil aluminium lohan-doha CNC
Manual milina farany fikosohana Fa PVC Window Proc ...
Auto Double Head Mitre Saw ho an'ny Aluminium sy Pvc ...
Machine milomano CNC ho an'ny profil aluminium